Anyị na-enyocha FFFworld filaments: Mgbanwe, PETG, ABS, Metal na PLA | Akụrụngwa n'efu
Taa, anyị ewetara gị ọtụtụ review site na keagwaraogwa iche iche nke filaments sitere na ụlọ ọrụ FFFWORLD. Onye nrụpụta a nke Alavés na-arụpụta ma na-etolite filaments nke ihe dị iche iche na njirimara teknụzụ kemgbe 2003 maka ahịa na-arịwanye elu.
N'oge a ka anyi nwaa ihe FFFworld filaments: Mgbanwe, PETG, ABS, Metal na PLA. Ha niile bụ ụdị dị iche iche dị iche iche site na ibe ha nke ga-etinye ahụmịhe anyị na ngwa nbipute ule iji nweta nsonaazụ kacha mma.
Iji nke ahụ mee ihe n'oge na-adịbeghị anya anyị nyochaa Legio de Leon onye nbipute 3D, anyị ejirila akụrụngwa ahụ maka nyocha a. Site na ịtinye akwa dị ọkụ na onye na-emepụta ihe "allinmetal", ọ bụ ezigbo nhọrọ iji zere nsogbu na filaments ọ bụla. Dị ka ngwanrọ na-ebi akwụkwọ, anyị ejiriwo Repetier ọbịa.
La emeputa website nwere a ọcha na kensinammuo imewe na ọ dị mfe ịnyagharịa site na ya iji chọta otu filament. N'otu ibe maka ihe ọ bụla, onye nrụpụta na-akọwa njirimara teknụzụ dịka nkwụsi ike ma ọ bụ ịgbatị kachasị.
Na mgbakwunye, onye nrụpụta nwere nnukwu echiche nke ime ka ndị ahịa ya dị na a raara onwe ya nye ngalaba nke weebụsaịtị gi na bipụta profaịlụ nke CURA, SLIC3R na SIMPLIFY3D nke filaments ya niile, yana a mpempe akwụkwọ teknụzụ.
Offọdụ n'ime ihe ndị ahụ nwekwara ọtụtụ ntuziaka obibi akwụkwọ nke edere ha n'akwụkwọ n'etiti ihe ndi ozo nsogbu nkịtị dị ka ịgba mgba ma ọ bụ ịgbawa ma ha dị iche Atụmatụ obibi akwụkwọ. Ihe ọzọ dị mma maka ndị rụpụtara maka iburu n'uche ihe isi ike dị na onye mepụtara ụwa maka ndị na-ebu ụzọ.
1 Ighapu FFFldld filaments: Mgbanwe, PETG, ABS, Metal na PLA
1.3 PLATECH filament
2 Mkpebi ikpeazụ na FFFworld filaments: Mgbanwe, PETG, ABS, Metal na PLA
Ighapu FFFldld filaments: Mgbanwe, PETG, ABS, Metal na PLA
Onye nrụpụta na-etinye nlebara anya pụrụ iche iji bunye ndị ahịa ya ihe ahụ. Ihe niile Ngwakọta ha tụgharịrị agụụ juru n'ọnụ na-esote silica desiccant sachet nakwa a zip akpa iji chekwaa filament na ọnọdụ kachasị mma ka ị ghara iji ya mee ka ọ ghara ịmịkọrọ mmiri mmiri. A na-ebute eriri igwe n'ime a ọkpọ katọn igbe Ọ ga-emetụta mmetụta ọ bụla ọ nwetara n'oge njem.
Ewetara ya ABSTECH Filament na-acha ọcha na agba ma na-echekwa otu ụdị okwu ọ bụla na nchapụta n'ime mbipụta ya ama m Mbipụta zuru oke na 230º C, okpomọkụ dị n'etiti ndị ọkachamara na-atụ aro ya. N'ime oge eji ya, anyị achọpụtala na ọ dịghị wetara isi, nke na - eme na ABS site na ndị nrụpụta ndị ọzọ. Na nke ọ bụla mbipụta anyị mere nwere iberibe detached n'ihi nsogbu nsogbu n'agbanyeghị na anyị na-etinye bed dị ọkụ na 50º C kama 100 nke ndị nrụpụta tụrụ aro ya.
O doro anya na nke a bụ eriri nke nyerela anyị agha kachasị n'oge ule. Nwere a agbanwe agbanwe agbanwe karịa PLA na nke a nwere ike ime ka ọ na-esiri ike ịdọrọ kwupụta extruder. Ọzọkwa nwere dị mfe gbazee oke ma rapara na oghere n'agbanyeghị iji obere okpomọkụ, gburugburu 190C. N'agbanyeghị ihe niile, anyị enweela ike ibipụta iberibe egosipụtara na foto ahụ na-enweghị iji usoro nkwado. Ọ bara uru ịlụ ọgụ maka obere oge na filament a, mgbe anyị mechara bipụta anyị ga-eju anya na echiche dị ịtụnanya na-enwetara na e biri ebi akụkụ na nanị otu 10% ụgwọ nke metal ahụ.
PLA bụ filament nke anyị niile nwere obi iru ala na-ebi akwụkwọ, ọ fọrọ nke nta ka ọ bụrụ na ọ naghị enwe nsogbu nsogbu, ọ naghị abụkarị ọnya na onye na-apụ apụ. Ọ bụ ya mere anyị ji chọọ itinye ya n'ule site n'ibi akwụkwọ nnukwu oghere dị larịị na ihe ndị e bipụtara na a mkpebi dị oke elu (Micron 50). Na agbanyeghị filament ahụ emeela nke ọma. Anyị ekwesighi iji akwa dị ọkụ iji nweta ọmarịcha Mbipụta agbasoro na isi na n'ígwé nke ọma jikọtara ọnụ. Ihe nlele ezigara bụ otu agba akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ "utoojoo apụl", a tonality na anyị hụrụ n'anya n'ezie.
Igwe na-agbanwe agbanwe nke onye nrụpụta a na-atọkarị ụtọ. Na-ejigide elasticity parameters yiri ndị ọzọ na-agbanwe filaments n'ahịa mana ọ dị oke mfe ibipute ya. Na-atụ aro iji okpomọkụ nke gburugburu ebe obibi 200CAnyị nwere filament nke na-agbaso ebe obibi akwụkwọ site na ike zuru oke ka ọ ghara ịtọpụ n'oge mbipụta, mana ozugbo ọ gwụchara ọ dị mfe iwepu ihe ahụ na ngwa nbipute. Ihe mkpuchi ahụ dịkwa ihe stiffer karịa filaments ndị ọzọ na-agbanwe agbanwe anyị nwalere, jiri obere nkọwa a na-eme ka obibi akwụkwọ dị mfe Nke onye nrụpụta na-ejisie ike ịbawanye ọnụ ọgụgụ nke ndị na-emepụta ihe dị iche iche nke ga-enwe ike ịme traction dị mkpa na ya iji jiri ya na-enweghị bends ma ọ bụ jams.
Agbanyeghị na ihe nnwale anyị natara jiri eriri igwe nwere obere oghere dị obere, anyị enyochala na webụsaịtị onye nrụpụta na ugbu a ewepụtala ihe a site na iji eriri nwere oke ogo.
Nke a bụ ihe ọzọ nke filaments na-esikarị ike ibipụta. Ihe omuma a bu ihe nro nke onye mere ya rue mgbe ha ghuru ya, o gha adi otutu, na-ewe ogologo oge iji jụrụ oyi, chọrọ nnukwu okpomọkụ obibi (na nke anyị 250ºC), na mkpokọta na ọ dị mfe maka akụkụ dị mma nke ihe e biri ebi na-ejedebe na bọl ma na-arapara na onye na-emegharị ahụ mgbe ọ na-agagharị. Anyị chọpụtara na FFFworld filament dị oke mma yana agba uhie uhie .
Mkpebi ikpeazụ na FFFworld filaments: Mgbanwe, PETG, ABS, Metal na PLA
Ihe ọ bụla n'ime nyocha ndị a nyochara karịa ihe anyị tụrụ anya ya. Site n'enyemaka niile nke onye nrụpụta ahụ nyere anyị, nsogbu ole na ole anyị nwere n'akụkụ anyị ga-enwe obere na anyị niile ga-ama otu esi edozi ha.
Mgbe m mepere ngwugwu ma chọta gị a na-echebe ihe niile n'ụzọ zuru oke na ọbụna obere akpa jelii agwa ị ghọtara nke ahụ FFFWORLD na-elebara nlezianya anya nke ọma. Have nwere otu mmetụta ahụ oge niile mgbe ị na-eji ngwaahịa ha. Site na Nsonye nke a zip-mkpọchi akpa ịchekwaa ihe ndi ahu, nke ha nwere eriri igwe y ahapụghị ihe fọdụrụnụ mgbe ị na-atụgharị na nkwụnye ahụ.
Nkọwa dị oke mkpa bụ etu filament ahụ si merụọ ahụ n'elu eriri igwe, ọ bụghị naanị na-arụ ọrụ ịchọ mma ma na-ahụkwa iwepu ihe na-aga n'ihu na-enweghị eriri nke ahụ nwere ike imebi echiche anyị.
Onye nrụpụta nwere akwụkwọ ndekọ aha ya nke ọma anyị na-atụ uche filament nke na-eme ka osisi na filaments ndị ọzọ dị egwu na anyị nwere ike ịchọta n'ụdị ndị ọzọ. Anyị nwere olile anya na onye nrụpụta ga-eji nwayọ gbasaa katalọgụ ya ka o nwee ike igboju ndị ahịa ya niile.
Ntụle nyocha a ọ masịrị gị? Miss na-atụ uche ọ bụla ọzọ na-egosi? Ga-achọ ka anyị gaa n'ihu na-enyocha ụdọ dị iche iche dị n'ahịa? Fọdụ ika pụrụ iche? Anyị ga-ege ntị na ihe ị hapụrụ anyị n'isiokwu ahụ.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụrụngwa n'efu » Nkọwa 3D » Anyị na-enyocha FFFworld filaments: Mgbanwe, PETG, ABS, Metal na PLA
Ihe Aleph mepụtara filament mbụ anaghị akwụ ụgwọ maka ndị na-ebi akwụkwọ 3D
Obi Juan nwetara Onyinye O'Really Open Source